एकवर्ष अगाडी नै मेलम्चीको पानी आउँछ भन्दै आश्वासन दिएकी मन्त्री बिनाको अर्को आश्वासन ! Nepalpatra एकवर्ष अगाडी नै मेलम्चीको पानी आउँछ भन्दै आश्वासन दिएकी मन्त्री बिनाको अर्को आश्वासन !
एकवर्ष अगाडी नै मेलम्चीको पानी आउँछ भन्दै आश्वासन दिएकी मन्त्री बिनाको अर्को आश्वासन !
असार ११, काठमाडौं । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन थप ढिलाइ हुने देखिएको छ । असार मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गरी सुरुङ परीक्षण गर्ने भनिए पनि प्राविधिक कारणले सम्भव नदेखिएको हो ।
बैठकमा सांसदले मेलम्चीको पानी कहिलेसम्म काठमाडौँ आउन सक्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । पटकपटक मिति सरेको हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि मेलम्ची आउने कुरामा मान्छेले विश्वास गर्न छाडेकोसमेत बैठकमा चर्चा भएको थियो । कामको प्राविधिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै फेरि समय सार्न नपर्ने गरी मिति तोक्नसमेत सांसदले निर्देशन गरेका छन् । समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भने, “आयोजनाको वास्तविक अवस्थाबारे र वास्तविक समय कति लाग्छ प्रस्ट भन्नुपर्छ । ” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन् ।